AmaBats ase-Austin, eTexas | Izindaba Zokuhamba
Amalulwane ase-Austin, eTexas
Inhlokodolobha yesifundazwe saseTexas Austin. Akulona neze idolobha elinabantu abaningi, njengoba iHouston ilishaya kakhulu, futhi ayiyona evakashelwa kakhulu izivakashi. Noma kunjalo, lingumuzi omuhle impela onezindawo eziningi ezithakazelisayo, njengamapaki nezakhiwo ezinkulu ezifana neCity Hall, isihlalo sikahulumeni wezwe noma ICondominius Tower, isakhiwo sokuhlala esifinyelela kumamitha ayi-172 ukuphakama, yize kusekhona isakhiwo eside edolobheni, I-Austonian.
Futhi-ke yini eyenza u-Austin adume, nangaphezu kwalokho okusha Ijubane lesifunda lapho kuzobanjelwa khona iFormula 1 Grand Prix kungekudala, zikhona amalulwane abo.
Ukube uBatman ubekhona ngempela, kungenzeka ukuthi u-Austin abe yikhaya lakhe, kanti iqiniso ukuthi idolobha laseTexas linomphakathi omkhulu walezi zilwane, eziningi kangangokuba azinakho ukubethelwa ngisho nasezinkulungwaneni, kepha zingaphezu kwesigidi. Ngakho-ke sikhuluma umphakathi omkhulu wasedolobheni emhlabeni zalezi zilwane ezincelisayo.
Lo mphakathi ubuthana ikakhulukazi egumbini elingaphansi kwelinye lamabhuloho edolobha, iCongress Bridge, phakathi nezinyanga ezifudumele, phakathi kukaMashi noNovemba. Ngaleso sikhathi, njalo kusihlwa, amalulwane aphuma nsuku zonke eyofuna isidlo sakusihlwa. Kuthiwa futhi zidla ngaphezu kwezinkulungwane zezinambuzane ubusuku ngabunye.
Hhayi-ke, labo bat abaphuma eCongress Bridge sebephendukile umbukiso omkhulu kunayo yonke futhi emcimbini omkhulu wabavakashi edolobheni lase-Austin. Ngakho-ke, njalo ntambama, izivakashi eziningi nabantu abanelukuluku beza ebhulohweni nasezindaweni ezilizungezile, zihlonyiswe kahle ngamakhamera wevidiyo nezithombe, ukuzindla ngesithombe esihle izinkulungwane zamalulwane ezindizayo nomsindo nokuhlokoma kwezinkulungwane nezinkulungwane zamaphiko ashayayo. Umbukwane wemvelo impela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ukuzilibazisa » Amalulwane ase-Austin, eTexas